भाग्यमानी छोरो – Part 31 - अलैंचीबारी2- Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » भाग्यमानी छोरो – Part 31 – अलैंचीबारी 2
“हेर्नु आमा आईमाई भनेकै चिक्नका लागि हो ? हजुर र बुबा नभाको बेलामा मेरो लाँडो निकै ठन्क्याथ्यो रुबीनाले पुती थाप्दै आएपछी मेरो लाँडोले छोड्न मानेन ! बुबाको गर्लफ्रेण्ड त महाको भालू रै’छे, कोही थाप्दै आउँछन् भने म किन चुप लागेर बस्थें र ? अनि हिजै राती त मैले सानीआमालाई चिकेको ! फेरी सानीआमाले सिधै मेरो लाँडो समातेर चाकको प्वालमा लगेर राखिदिनुभयो ! मजा आयो !” आमा लाईनमा आइसक्नुभएको थियो, सोध्नुभयो “गाह्रो हुँदैन चाकमा ?” मैले मोबाईलमा एउटा भिडियो खोलेर देखाउँदै भनें “लौ हेर्नुस् ! नभए एकपटक ट्राई गरेर हेर्नु चित्त बुझेन भने अर्को पटक देखि नगर्नुहोला नि त ?” “लौ क्यारुँ त नि ? फेरी तँ पनि बिच्केलास् भन्ने डर ?” “हजुरले चाकलाई अलि सजिलै खुलाउनुस् केहि हुन्न ?”
मैले आमाको लुङ्गीलाई अम्रिसो काटेर फिजाँएको ठाउँमा ओछ्याएँ र आमालाई त्यसमाथी पल्टाएँ अनि आमाको खुट्टा फारेर पुतीमा ओंठ जोडेर चुस्न सुरु गरें । आमाले नयाँ तरुनीले झैं आफ्नो उत्तेजना झल्काउँदै आँखा बन्द गरेर मेरो टाउकोलाई दुवै हातले समाएर पुतीमाथी गाडेझैं गर्नुभयो, मैले मेरो हातलाई आमाको पोका खेलाउनमा मस्त गराएँ भने अर्को हातले मैले आफ्नो पेन्टको जिपर खोल्न थालें । निकैबेर आमाको पुती चुसेर छिपछिपे बनाएपछी मैले आमाको पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्न सुरु गरें । खुला आकाशमुनि आमा र छोराको त्यो चिकाई निकै अनुकरणिय थियो । म आमाको पुतीमा मच्चिदैं गर्दा आमाको पोकाहरु मजाले हल्लिएर मलाई स्वागत गरिरहेका थिए । केहिबेर आमाको पुतीमा चिकेर मैले लाँडो झिक्दै भनें “आमा ! अब हजुर घोडी भएर बस्नुस् म तपाईको चाकको ढोका खोल्छु ।“
आमा सरासर उठेर आफूलाई घोडीको आसनमा राख्नुभयो र मैले आमाको चाकको दुवै पुठ्ठा समातेर फट्याउँदै चाकको प्वालमा पर्नेगरि थुक खसालें अनि बुढी औंलालाई आमाको चाकमा खेलाउन थालें । “मलाई त कस्तो डर लाग्दैछ छोरा केहि भईहाल्यो भने ?” मैले भनें “हजुरकी भर्खरकी तरुनी छोरीले त चाकमा चिकाईसकी डराउनुहुन्छ… ढुक्क हुनुस् केही हुँदैन !” अनि हातभरी थुक लिएर लाँडोलाई भिजाउँदै मैले लाँडोको टुप्पोलाई आमाको चाकको प्वालमा सोझ्याएँ, आमाले चाकको प्वाललाई सहज तरिकाले छोडेकी थिईन् ताकी मलाई सजिलो होस् । आमाले सोध्नुभयो “अनि रुबीनालाई चिक्न तँलाई कस्तो मनले मानेको ?” “के मन चाहियो आमा ! तपाईलाई चिक्दा मलाई केही अप्ठेरो लाग्यो र अनि उ त हजुरकै छोरी त हो नि ? यतिखेर बुबासँग गाँड मराउँदै होली !” “हँ के भन्छ यो ? तेरो बाउले पनि चिक्छन् छोरीलाई ?” “अनि के त ? उसलाई त अझ बुबा र मेरो दुवै लाँडो एकैपटक छिराउने रहर पो हुन्छ त ? कति मजाले चिकाउँछे जाँठीले ।“